Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana khasab igu ah in aan ilaaliyo walaashayda si aan u hubsado in aysan banaanka ula bixin wiilasha. Waa in ay ugu dhaqmaan si wanaagsan dadka dhexdooda. Midaan waxay ka tahay arin sharafeed qoyskayga. Waalidiintaydu waxay dhahaan in aan anigu masuul ka ahay. Inta baddan arintu waa mid dhib baddan. Maxaa ila habboon in aan sameeyo? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno jir ah saaxiibadayna waxay aadaan magaalada si ay u dhibaan una taabtaan gabdhaha ayaga oo midaasna ciyaar ka dhiganaya. Anigu ma doonayo in aan qayb ka noqdo. Maxaa ila habboon in aan sameeyo?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah saaxiib ayaana ii sheegay in gudaha dalka Jarmalka aad uga taaban kartid gabdhaha dabadooda oona midaasi laguugu ciqaabin. Midaasi ma tahay mid run ah?